हात खुट्टामा माकुराको जालो जस्तो नीलो नशा खुम्चिएको छ ? यसरी गर्नुहोस् घरमै उपचार – Jagaran Nepal
काठमाडौँ । तपाईंले प्राय देख्नु भएको होला कि माकुराको जालो जस्तै आकारको नीलो नसाहरु हात वा खुट्टाहरूमा छालाको माथि देखिन्छ। कहिलेकाँहि यो खुट्टा वा खुट्टामा भन्दा माथि फिलामा बढी देखिन्छ, वा कहिले कुर्कुचोको छेउमा, यो नीलो नसा खुट्टा वा साप्रामा धेरै ठूलो हुन्छन्।
के तपाईंले कहिल्यै याद गर्नु भएको छ कि तपाईंको परिवारको सदस्यहरूको पाखुरामा नीलो नशा ठूलो परिमाणमा उत्पन्न हुन्छ । साथै हात पनि सुनिन्छ होला। के तपाईंले कहिलेकाँही मानिसहरूमा नीलो नशा गुचुमुचु भएको देख्नुभएको छ ? विशेष गरी छातीको माथिल्लो भाग र घाँटीको तल्लो भागमा यो देखिने गर्दछ ।
यदि, कुनै कारणवश, शरीरको भित्रपट्टि रहेको बाक्लो नशाहरूको प्रणाली अवरोध भयो भने, यसले बाहिरी सतहबाट आउने रगतलाई स्वीकार गर्न सक्षम हुँदैन, जसले गर्दा छाला भित्रिनुको सट्टा छालाको भित्री सतहमा रहन्छ, जसले अशुद्ध रगल भित्री सतहमा नै जम्मा पारेर राख्दिन्छ । जसले छालाको भित्रीभागमा अशुद्ध रगत बढी जम्मा हुन्छ । र निलो नशा गुचुमुचु जस्तो आकारको नशा उत्पन्न हुन्छ ।
नशा देखिनुको कारण
नसा फैलिदै गएको देखिनु
यस बाहेक, एप्पल साइडर भिनेगर ( Apple Cider Vinegar) धेरै लाभदायक हुन सक्छ । एप्पल साइडर भिनेगरसँग हल्का मालिश गर्नुपर्दछ र दिनमा दुई चम्चा दुई दिन लिनु पर्छ र पानीमा खानुपर्छ। एसिडिटी बिरामीहरूले एप्पल साइडर भिनेगर प्रयोग गर्नु हुँदैन। यदि आवश्यक छ भने, त्यस सँगै एसिडिटीको औषधीहरू लिनुहोस् ।
लगातार १ महिनासम्म यो काम गर्नुहोस्, तपाईको यो समस्या हटेर जानेछ । यदि तपाइँलाई हल्का चिलाउँछ भने, बुझ्नुहोस् कि तपाइँको रोग निको भइरहेको छ, तर चिलाउनु हँदैन ।
स्रोत( दैनिक भास्कर हिन्दी)